काम गर्ने इन्जिनियरिङ सर्जक, नाम पाउने नेता !, यसरी देश बन्दैन - Engineers Post
काम गर्ने इन्जिनियरिङ सर्जक, नाम पाउने नेता !, यसरी देश बन्दैन
ई. भीम उपाध्यायApril 25, 2021
विकासित देशहरुमा चमत्कारिक स्मारक वा भौतिक पूर्वाधार वा संरचना हेर्न जानेहरुको पहिलो प्रश्न हुने गर्छ, यसको डिजाइन कसले गरेको थियो ? यसको निर्माण कसले गरेको थियो ? त्यहाँ कसले शिलान्यास गर्यो, कसले उद्घाटन गर्यो भन्ने कुराको कुनै मतलब हुँदैन, गर्दैनन् ।
हाम्रो जस्तो देशमा जसले सिन्को भाँचेको छैन, उसले बनायो भनिन्छ । शिलान्यास र उद्घाटनको शिलापत्रमा उसको मात्र नाम राखिन्छ, जसको इन्जिनियरिङ इतिहासमा कुनै अर्थ हुँदैन, कुनै भूमिका हुँदैन ।
यो नै अविकसित र उन्नत देश, जनता वा समाजबीचमा हुने भिन्नता हो । त्योभन्दा अझ सवा एक्काइस शताब्दीमा नेपाली जनताहरू कतिसम्म उल्लु बनाइएका छन्, ग्वाँच बनेका छन् भन्ने प्रमाण पनि हो । कसले डिजाइन गर्यो होला, कसले निर्माण गर्यो होला भन्ने जिज्ञासा नै नआउने मन्द बुद्धिका युवाहरूको जमात बढ्दै जानु देशका लागि अभिशाप हो । कर्मयोगीको सम्मान गर्न नजानेको समाज विलिन हुँदै जान्छ ।
विकशित मुलुकहरूमा बनेका महत्वपूर्ण संरचना हेर्न म जहाँजहाँ पुगेको छु, सर्जकको नाम ठूला–सुनौला अक्षरमा लेखेको भेटेको हुन्छु । उदाहरणका लागि, न्यूयोर्कको म्यानहेटेनस्थित ब्रुकलिन ब्रिजमा राखिएको प्लेटमा डिजाइनर र निर्माणकर्ताको नाम छ ।
म आफै स्थानीय विकास, डोलिडारमा करिब ८ वर्षअघि डिजी हुँदा देशभरिका झोलुंगे पुलहरूका शिलापत्रमा डिजाइर, निर्माणकर्ता र सुपरिवेक्षक प्राविधिकहरूको नाम लेख्ने नीति लागू गरेको थिएँ । त्यसयता बनेका सबैजसो झोलुंगे पुलमा डिजाइनर, प्राविधिज्ञको नाम उल्लेख गरिँदै आएको छ ।
इन्जिनियर फरक सर्जक हो
आफूले गर्न नसके नेताहरूले विपक्षलाई दोष दिएर उम्कन्छन्, सकियो । आफ्नो पक्षकाको मुद्दामा हार भए वकिलले न्यायाधीशलाई दोष दिएर उम्कन्छन्, कुरा सकियो । रोगी मरे डाक्टरले भगवानलाई दोष दिएर उम्कन्छन्, खरानी बनेपछि सकियो ।
तर इन्जिनियरले आफूले बनाएको संरचनामा उसले कसैलाई दोष दिएर उम्कन सक्दैन । बनेको संरचना सयौँ वर्ष टिक्ने र कैयन पुस्ताले हेर्ने, उपयोग गर्ने भएकाले मरेर खरानी भए पनि ऊ आफ्नो दोषबाट उम्कन सक्दैन ।
नेपालमा बनेका ऐतिहासिक वा आधुनिक प्रसिद्ध भौतिक संरचना वा स्मारकको डिजाइन र निर्माण नेतृत्व गर्ने इन्जिनियरहरूमध्ये कृष्ण नरसिंह राणा, कुमार नरसिंह राणा, डिल्लीजंग थापा, हलदयाल सिंह मनोहर सिंह, शंकरनाथ रिमाल, विष्णु पन्थीको नाम अग्रणीमा गनिन्छ ।
इन्जिनियरिङ सर्जकहरूलाई ओझेलमा पारिएको देश विकसित बन्नै सक्दैन । अहिलेको नयाँ धरहराको डिजाइनर को हुन् थाहा छ ? उनी यो प्रोजेक्टको कन्सल्यान्ट प्रिन्सिपल, टिम लिडर वरिष्ठ आर्किटेक्ट इन्जिनियर, विष्णु पन्थी हुन् ।
पन्थीजीलाई बधाई छ, तपाईंको रचनाले मूर्तरूप पाएकोमा । हामी तपाईंलाई आधुनिक धरहराको सर्जक भनेर चिन्न पाएकोमा गर्व छ । सरकारले उनलाई जनतासामू चिनाएन । उद्घाटनको दिनसमेत उनको कामको सम्मान भएन । तर, हामी उनको सम्मा गर्छौँ । अब जनता धेरै उल्लु हुनु भएन । निर्माता र सर्जकलाई चिन्नु पर्यो । लोक सेवाको परीक्षाको नयाँ धरहरा कसले बनायो भनेर गलत मान्छेको नाम घोक्नु त पर्ला तर, तपाईंको मनको परीक्षामा सधै विष्णु पन्थीको नाम रहिरहोस् ।